Minya: Manana tantara maro hafa ireo mpandray anjara amin’ny atrikasa · Global Voices teny Malagasy
Tohin'ny fizotran'ilay tetikasa Women of Minya Day by Day".
Voadika ny 21 Oktobra 2019 8:39 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Novambra 2010)
Mifampitohy amin'ny vokatr'ilay atrikasa voalohany ho an'ny “Women of Minya Day by Day” izay notanterahina ny 23-25 Septambra 2010; nanoratra i Nevine Fahem, mpikarakara ilay tetikasa, fa manodidina ny 16 ireo lahatsoratra nampiakarina ho vokatra voalohan'ity atrikasa ity. Nifantoka taminà olana samy hafa tao amin'ny vohitr'i Dawadeyya avokoa ireo lahatsoratra rehetra, ary samy miresaka momba ny fitoviana sy ny fanomezan-kery ho an'ny vehivavy anatinny faritra ambanivohitra.
Nomarihany ihany koa fa nanokana fizaràna iray naharitra tapakandro ho an'ny fakana sary nomerika io atrikasa io, izay nanaovan'ireo vehivavy fampiharana tamin'ny fakàna sary an-dry zareo samy ry zareo. Hatao ao amin'io vohitra io mihitsy ny fitsidihana manaraka, izay handraisan'ireo vehivavy anjara anatinà atrikasa mafy hidinana an-tsehatra hanampiana azy ireo haka sary irery ao am-bohitra.
Sary ho an'ny fiantsonan'ny fiarandalamby an'i Menia avy ao amin'ny pejy Facebook-n'ilay tetikasa.
Iray amin'ireo tantara hafa voatonona ny an'i “Mariam”, vehivavy 25 taona maty vady indroa, ary nanambady fanintelony taminà lehilahy 65 taona.
Vavitokanà fianakaviana tena mahantra i Mariam. Nanana anadahy 4 izy. Tsy maintsy niasa nividy sy niverina nivarotra entamadinika tamin'ny alàlan'ny vola fisotroan'ny reniny ronono izy, 80 Livres isam-bolana. Fony izy 15 taona, nangatahan'ny “cousin” any ho vadiny izy. Nanaiky izy, nanantena fiainana tsara kokoa.
Tsy ela akory, niady tamin'ny vadiny sy ny rafozam-baviny izy na dia nanao izay rehetra nangatahina taminy aza. Isanandro, vao mangiran-dratsy izy dia efa mifoha, manadio, mamahana sy mitery ronono ny omby ary manamboatra fromazy. Nanao ny fikarakarana trano rehetra izy hany ka tsy nanana fotoana mba ho azy manokana. Nanomboka tsy niraharaha ny filàn'ny vadiny izy. Tsy vitan-drangahy ny niharitra izany ka namono tena nandoro ny vatany izy. Fotoana fohy taorian'io dia maty izy rehefa nijanona 2 andro tany amin'ny hôpitaly.
Saingy tsy mijanona eo ny tantara, niverina tany amin'ny tranon-dreniny i “Mariam” avy eo fony izy 17 taona. Ary mba hitsoahany ireo toepiaina ratsy tao an-trano, nanaiky fangatahana fanambadiana iray hafa izy, nanantena fiainana tsara kokoa, saingy maty tampoka indray koa ny vadiny faharoa.
Niverina tany amin'ny tranon-dreniny indray izy saingy tamin'ity indray mitoraka ity tsy tsy nahatanty azy ry zareo ary nanomboka nanatsafa azy tamin'ny fahantrany sy ny fahafatesan'ny vadiny roa, niteny taminy fa izy no anton'izao. Tamin'ny farany dia nahazo fangatahana fanambadiana avy aminà lahy antitra, 65 taona, izy. Tsy nandia fianarana izy ary tsy afaka ny hiandry vintana tsra kokoa nóho izao.
Sarin'ireo mpandray anjara tanatinà fiofanana manorara bilaogy nataon'i Nevine Fahem.
Tantara iray hafa mahavaky fo koa ny an'i “Nadia”, tovovavy anatinà fianakaviana ahitàna olona 8 – izay niharitra ny mafy rehefa nodimandry ny rainy ka tsy namela vola fisotroan-dronono ho an-dry zareo.
Olona maro no nanampy anay nandritra ny fotoana nahararian'ny raiko ka mandra-pahafatiny. Tsy maintsy niasa ny reniko. Mpanao mofo sy mpanagom-bokatra no asany saingy tsy ampy hamahanana, hampitafiana sy hamianarana zaza 7 izany.
Nangataka anay hiasa anatin'ny fanamboarana trano ireo mponina, 3 livres ny iray andro anatin'izany ny sakafonay. […] Niasa 12 ora isanandro izahay, nilohaloha fitaovam-panorenana izay simenitra, fasika ary biriky fotsy, nitatitra azy ireny tany amin'ny kombarika. Nanambany anay mafy ry zareo saingy tsy afaka niaina tsy nisy io asa io izahay. Tsy maintsy niaritra izany rehetra izany izahay mba hivelomanay.
Tsy afaka nanohy ny fianarany ireo anadahiko. Tsy nahita fianarana mihitsy kosa ny telo tamin'ireo rahavaviko. Nikarakara trano no nataony. Iray ihany no mba nandeha tanatinà ivontoerana ho an'ny tsy mahay mamaky teny nandritra ny fotoana fohy. Izaho irery ihany no tonga hatrany amin'ny lisea.
Nitantara ny [ar] fiterahany vavy i “Heba”, mpandray anjara iray hafa anatin'ilay atrikasa. 14 taona izy no nanambady. Tsy ela taorian'io dia niteraka zazavavy 3 izy, izay nitenenan'ny dokotera taminy fa tsy tokony hiteraka intsony izy – satria mampidi-doza ho an'ny fahasalamany izany. Nanomboka ratsy ny fitondran'ny rafozam-baviny azy mba hiterahany lahikely!
Efa saika maty izy, na teo aza ny asa trano nataony handohavana ny lany amin'ireo zanany vavy sy hanampiana ny vadiny. Kanefa tsy nitsetra azy ry zareo, ary niteny fa mila manana zazalahy ry zareo, raha tsy izany dia horoasiny ivelan'ny trano izy s'ireo zanany vavy ary hanambady vehivavy hafa ralehilahy. Kamboty izy, ary tsy manana olon-kafa hanampy azy ara-bola. […]
Manontany ny tokony hataony izy mba hanatanterahana ny fanirian'ny vadiny? sy ny hoe andraikiny irery ihany ve ny fiterahana zazalahy?
Fiatoana fisotroana dite nandritra ny iray tamin'ireo atrikasa.
Raha ny momba ireo drafitra ho avy momba ilay tetikasa kosa, nanoratra izao tao amin'ny bilaogin'ilay tetikasa i Nevine:
Tsy azoko lavina fa ny zo ho salama no olana lehibe indrindra tian'ireo vehivavy hosoratana sy halaina sary ary raketina an-dahatsary. Koa noho izany amin'ny volana ambony izahay dia hanokana lahatsoratra hafa momba ny toepahasalaman'ny vehivavy miaraka aminà fakàna lahatsary miaraka amin'ireo vehivavy ireo ihany sy ireo dokotera anatin'ny tobim-pahasalamana, hôpitaly ary fivarotam-panafody.
Ary koa, manantena izahay fa hanome fanampiana ara-dalàna avy aminà ONG izay hafa ho an'ireo vehivavy anatin'ilay vohitra izay mila miantoka ny fonenany sy hitafatafa miaraka amin'ireo mpisolovava sy ireo vehivavy. Manantena ihany koa izahay fa hihaona amin'ireo mpandray anjara hafa ao am-bohitra izahay mba hifantohana amin'ny zon'ny vehivavy ary hampifandraisana ilay vohitra amin'ireo mpandray fanapahankevitra.
Afaka manaraka ireo vaovao avy amin'io tetikasa io ianao amin'ny alàlan'ny pejy Twitter, sy ny fantsona YouTube an-dry zareo.